Singapore Institute of Commerce (SIC) တွင် Candian Degrees များရယူနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » Singapore Institute of Commerce (SIC) တွင် Candian Degrees များရယူနိုင်
Singapore Institute of Commerce (SIC) တွင် Candian Degrees များရယူနိုင်
Posted by zinmyotun on Nov 2, 2010 in Education, Myanma News, News, South East Asia | 1 comment
Singapore တွင် Business IT, Engineering နှင့် Legal Program များကို တက်ရောက်သင် ကြားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ Engineering Program များမှ Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) များကို RMIT University နှင့် ချိတ်ဆက်သင် ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် Edexcel (UK) မှ ချီးမြှင့်သော BTEC Higher National Diploma များထဲမှ Electronic & Electircal Engineering Program ကိုတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။SIC တွင် RMIT University, Victoria University, University of New Brunswick (First Canandian University@ Singapore) များမှ Business, IT and Engineering နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သော ဘာသာရပ်များ သည် Pattner University များ၏ On Campus ၌ သင်ကြားပေး သော Quality များနှင့် တူညီခြင်းကြောင့် SIC သည် ကမ္ဘာတွင် ကျော်ကြားသော အဖွဲ့အစည်း တော်တော် များများမှ အသိအမှတ် ပြုခြင်းခံရကြောင်း သိရသည်။University of New Bruns-wick (UNB)သည် စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဂျပန် နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ကဲ့သို့သော ၇၃ နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ များကို သင်ကြားပေးလျက် Canada Universities များကြားထဲ တွင်Top5အဖြစ်ရပ်တည်လျက် ရှိပြီး Canada Business Magazine ၏ ဖော်ပြချက်အရ 22 Canadian MBA Program တွင် UNB ရှိ MBA-Program သည် နံပါတ်-၉ နေရာ၌ရပ်တည်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ကျောင်းသားကျောင်းသူ များသည် Finance, Logistic, Marketing, Accounting, Entrepreneurship, International Businessစသည့်Program တို့ကို Diploma Associate Degree, Advanced Diploma, Bachelor Level တို့အထိ ရွေးချယ်တက် ရောက်နိုင်ပါသည်။ (UNB) Singapore Campus တွင် Business Program များကို တက် ရောက်သင်ကြားခြင်းဖြင့် (UNB), Canada မှချီးမြှင့်သည့် Diploma လက်မှက်၊ Advanced Diploma လက်မှတ်၊ Associated Degree, Advanced Diploma လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်တို့ကို တိုက်ရိုက်ရရှိ မည့်အပြင် Bachelor ပြီးဆုံးသူ များသည် Employment Pass Eligibilty Certificate (EPEC) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (1 Year) ကိုပါ လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း MSI မှ သိရှိရပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက MSI ဖုန်း ဝ၁-၂၅၀၉၂၉ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင် ကြောင်း သိရသည်။Singapore Institute of Commerce (SIC) နှင့်ပတ်သက် သော အကြောင်းအရာများ၊ ရယူ နိုင်သော Degree များနှင့်ပတ်သက် သည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို SIC မှ Country Manager ကိုကျော်ဇေ ယျမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည်ဖြစ် သည်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၄ (ကြာသာပတေး) ရက်နေ့တွင် MSI ရုံးခန်းတွင် နေ့လယ် ၃ နာရီ မှ ၅ နာရီထိ ရှင်းလင်းပြောကြား မည်ဖြစ်သည်။
စကေးဝါ့ခါတွေကတော့ …ကနေဒါမှာ ဘွဲ့သွားယူလိုက်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
အောက်ကလင့်မှာဖြေကြည့်လို့ ၆ရမှတ်ရရင် ကနေဒါဗီဇာဖို့ အခြေအနေကောင်းတာမို ့..စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဖြေကြည့်ကြစေချင်ပါကြောင်း..။
The self-assessment test will help you determine if you would earn enough points in the six selection factors to qualify asaskilled worker immigrant. Note: you must meet the minimum requirements for your application to be eligible for processing. Use our eligibility tool to see if you would meet the minimum requirements.
This test is only for guidance. A Citizenship and Immigration Canada (CIC) officer will makeadecision about your application based on the information you provide.